စီမံခန့်ခွဲမှု | Panasonic-100 YEARS of ‘BETTER’
Matsushita Electric Trading တည်ထောင်ခြင်း
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံများသည် နိုင်ငံရပ်ခြားကုန်သွယ်မှုအတွက် ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများကို အဓိက မှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည့် အချိန်ကာလတွင် ပို့ကုန်များ မြှင့်တင်ရန်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ တစ်လျှောက်တွင် ရောင်းချသည့်လမ်းကြောင်းများ ချဲ့ထွင်ရန် Matsushita Electric Trading ကို တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အတူယှဉ်တွဲ ဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းဟူသော အတွေးအခေါ်ပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။Panasonic လုပ်ငန်း သမိုင်းမှတ်တမ်း
ဗဟို သုတေသန လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခြင်း
1953 ခုနှစ်တွင် အိုဆာကာမြို့၌ ဗဟို သုတေသန လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များကို စတင်မြှင့်တင်၍ ပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်သည့် ကိရိယာများ ခေတ်မီလာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းသည် အခြေခံ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရာတွင် ဌာနအမျိုးမျိုးကို အကူအညီပေးခဲ့သည့်အပြင် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စက်အားသုံး အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် နည်းပညာရပ်များတွင် သုတေသနနှင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုန်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်းသုတေသနပညာကို သင်ကြားပေးသည့် ဌာနတစ်ခုနှင့်အတူ အထူးထုတ်လုပ်ထားသော စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးတို့ ပေါင်းစပ်ထားသော ဘက်ပေါင်းစုံ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သုတေသနအဆောက်အအုံတစ်ခု ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းခေတ်သစ်တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာစေရန် တွန်းအားတစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် ဗဟိုသုတေသန လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းကို ပြသထားသည်။လုပ်ငန်း၏ သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
KDK Kawakita Electric က မတ်ဆုရှိတ အုပ်စုတွင် ပါဝင်ခြင်း
Panasonic ကို တည်ထောင်ပြီးလျှင်ပြီးချင်း KDK Kawakita သည် လျှပ်စစ်ပန်ကာတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်ကာပြားများကို ကုမ္ပဏီမှ စတင်မှာယူခဲ့သည်။ များမကြာမီတွင် KDK Kawakita သည် အိုဆာကာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး သီးခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ကာ1962 ခုနှစ်တွင် မတ်ဆုရှိတ အုပ်စုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အမည်ကို မတ်ဆုရှိတ ဆီကိုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများကို "လေနှင့် ရေ" ဟူသော အဓိက စကားလုံးများဖြင့် လမ်းပြခဲ့သည်။ 2003 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အမည်ကို မတ်ဆုရှိတ ဂေဟစနစ် (Matsushita Eco Systems) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 2008 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အမည်ကို Panasonic Eco Systems ဟု ထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Matsushita Electronics Corporation က Deming ဆုကို ရရှိခြင်း
1950 ပြည့်နှစ်များ၏ နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် Panasonic သည် စက်အားသုံး အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်သည့် စက်ရုံများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားအုပ်စု အသစ်မျိုးစုံကို အများအပြား စတင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့သည်။ Matsushita Electronics Corporation ၏ စက်ရုံအုပ်စုများအနက် ထိပ်တန်းစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သော တာကာဆုကိ စက်ရုံသည် လျှပ်စစ်နည်းပညာ ခေတ်သစ်၏ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး ထူးကဲကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများကို ချီးမြှင့်သည့် ကမ္ဘာ့ အထင်ကရ Deming ဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် Deming ဆုတံဆိပ်ကို ပြသထားသည်။
Matsushita Electric Corporation of America ကို တည်ထောင်ခြင်း
ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ပြည်ပ အရောင်းကွန်ရက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် လက်ရှိ နယူးယောက် ရုံးခွဲကို Matsushita Electric Corporation of America ဟု ပြောင်းလဲ၍ ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြား အရောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် 1965 ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ပါတီပွဲတစ်ခုရှိ Matsushita Electric Corporation of America ၏ ဝန်ထမ်းများကို ပြသထားသည်။
ဝန်ထမ်းများကို ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် စေလွှတ်ခြင်း
ဒုတိယ ကမ္ဘ္ဘာစစ်ပြီးနောက် အရှိန်အဟုန် မြန်ဆန်စွာဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အောင်မြင်နေစဉ် Panasonic ၏ နောက်ထပ် ရည်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြသော လူပေါင်းများစွာ၏ ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေး ကူညီပံ့ပိုးပေးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာရန်ပင် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန် စစ်ပြီးခေတ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးနေသည့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ Panasonic ဝန်ထမ်းများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
National Thai ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ခြင်း
National Thai ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်မှုနှင့်အတူ အဆိုပါနှစ်ကို ကုမ္ပဏီ၏ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများအတွက် နည်းပညာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် စက်ရုံများ အင်တိုက်အားတိုက် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်သည့်နှစ်အဖြစ် မှတ်ယူခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း ဘက်ထရီခြောက်များ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်သည် "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမြင်ရှုထောင့်မှနေ၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး သင် စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာအတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် ဆက်လက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်" ဟူသော ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒနှင့် ညီညွတ်ခဲ့ပါသည်။
Panasonic ၏ ပထမဆုံး ဥရောပ အရောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟန်းဘဂ်မြို့တွင် Matsushita Electric Hamburg ကို တည်ထောင်ခြင်း
1959 ခုနှစ်တွင်၊ Panasonic သည် ဈေးကွက်သုတေသန ပြုလုပ်ရန် ဝန်ထမ်းများကို ဥရောပသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ညီမျှစွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများ အနားတွင် အသင့်ရှိနေရန်နှင့် မြန်ဆန်သော ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး စနစ်တစ်ခု ရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။ 1962 ခုနှစ်တွင် ဟန်းဘဂ်မြို့၏ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည့် သင်္ဘောဆိပ်ကို အသုံးပြု၍ ဥရောပ၏ နိုင်ငံဒေသများစွာသို့ ကုန်စည်များ ပို့ဆောင်ရန် စနစ်တစ်ခုအဖြစ် Panasonic ၏ ပထမဆုံး ဥရောပ အရောင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Matsushita Electric Hamburg ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် Matsushita Electric Hamburg ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန်က ရုံးခန်းကို ပြသထားပါသည်။
Matsushita Electric Industrial Company of America ၏ ရုံးကို Pan Am အဆောက်အအုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
Matsushita Electric Corporation of America ကို နယူးယောက်ပြည်နယ် မန်ဟက်တန်မြို့ရှိ Pan Am အဆောက်အအုံ 29 လွှာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် နယူးယောက်ပြည်နယ် မန်ဟက်တန်မြို့ရှိ Pan Am အဆောက်အအုံ (လက်ရှိတွင် MetLife အဆောက်အအုံ) ကို ပြသထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် National Mallory Battery ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် P.R. Mallory (လက်ရှိ Duracell) နှင့် ပူးပေါင်းပြီး National Mallory Battery ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ 1967 ခုနှစ်တွင် Panasonic သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး အယ်လ်ကာလိုင်း ဘက်ထရီခြောက်ကို "National Mallory အယ်လ်ကာလိုင်း ဘက်ထရီခြောက်" အဖြစ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်း 1979 ခုနှစ်တွင် Panasonic သည် P.R Mallory နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုတရားဝင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး Panasonic ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေး ဌာနနှင့် National Mallory ဘက်ထရီလုပ်ငန်းကို ပေါင်းစည်းပြီး Matsushita Battery Industrial အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
Matsushita Electric Company (မလေးရှား) ကို တည်ထောင်ခြင်း
မလေးရှား အစိုးရက ဘက်ထရီခြောက် တင်သွင်းမှုကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်က Panasonic အား မလေးရှားနိုင်ငံ အခြေစိုက် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါနှစ်အတွင်းတွင် Matsushita Electric Company (မလေးရှား) ကို ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ 1966 ခုနှစ်တွင် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအတွက် ရှယ်ယာများကို ကွာလာလမ်ပူ ဈေးကွက်ရှိ အများပြည်သူထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်သည် ကုမ္ပဏီကို ပထမဆုံး အများပြည်သူပိုင် ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပြီး "မလေးရှားလူမျိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ" အဖြစ် လူထုကြားတွင် Panasonic ၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုလည်း မြင့်တက်စေခဲ့ကာ ယနေ့အခါတွင် Panasonic Manufacturing Malaysia အဖြစ် လူသိများထင်ရှားလျက်ရှိသည်။
Matsushita Electric of Puerto Rico နှင့် National Mexicana ကို တည်ထောင်ခြင်း
အမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက် ရေဒီယိုနာရီများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရန် Matsushita Electric of Puerto Rico ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ဒေသခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အတူ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်၍ National Mexicana ကို ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
လက်တင်အမေရိကတွင် Panasonic ၏ ပထမဆုံး Peruvian Battery Manufacturer ၊ National Peruana ကို တည်ထောင်ခြင်း
အဆိုပါအချိန်ဝန်းကျင်တွင် ပီရူးနိုင်ငံတွင် ရေဒီယိုများနှင့် အဖြူအမဲ တီဗွီများ တင်သွင်းခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သော်လည်း ဘက်ထရီခြောက်များအတွက် အလားအလာမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး 100% နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေများကြောင့် Panasonic သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး Central American ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်သော National Peruana (Grupo Matsushita Electric del Perú) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘက်ထရီခြောက်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Panasonic ၏ ပထမဆုံး အရှေ့အာဖရိက ဘက်ထရီခြောက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခြင်း
1965 ခုနှစ်တွင် အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်သော ကင်ညာ၊ ယူဂန်ဒါနှင့် တန်ဇနီးယားနိုင်ငံအားလုံးသည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဘက်ထရီခြောက်များ တင်သွင်းခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းအခြေအနေကြောင့် Panasonic ၏ ပထမဆုံး အာဖရိက ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော အရှေ့အာဖရိက မတ်ဆုရှိတ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အာဖရိကနိုင်ငံ၏ ဗြိတိသျှ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဌာနရှိ ဒေသခံအရောင်းကုမ္ပဏီ၏ များပြားသော ဝယ်လိုအားများကြောင့် ဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
Matsushita Electric of Canada Limited ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Costa Rica ကို တည်ထောင်ခြင်း
1967 ခုနှစ်တွင်၊ Matsushita Electric Costa Rica ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် 1988 ခုနှစ်တွင် Panasonic ကိုစတာရီကာ ဖြစ်လာပြီး 2000 ခုနှစ်တွင် Panasonic ဂွာတီမာလာနှင့် Panasonic အယ်လ်ဆာဗေဒါတို့ကို ပေါင်းစည်းပြီး Panasonic အမေရိကားအလယ်ပိုင်းအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Matsushita Electric (သြစတေးလျ) ကို တည်ထောင်ခြင်း
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဈေးကွက်ထဲသို့ အဓိက ဖြန့်ချိသည့် ထုတ်ကုန်များမှာ ဘက်ထရီခြောက်များ၊ ရေဒီယိုများနှင့် တိပ်ခွေအသံသွင်းစက်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒေသခံလုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ပေးရန် တီဗွီများ ကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များအပေါ်ကောက်ခံသည့် သွင်းကုန်အခွန်မြင့်မားခြင်းကြောင့် Matsushita Electric (သြစတေးလျ) ကို အစားထိုးသွင်းကုန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အခြေစိုက် နေရာတစ်ခုအဖြစ် ချက်ချင်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Matsushita Electric ဘရာဇီးကို တည်ထောင်ခြင်း
ဘရာဇီး နိုင်ငံတွင် Matsushita Electric ဘရာဇီးကို တစ်ဦးတည်း 100% ပိုင်ဆိုင်သည့်အရောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က တောင်အမေရိကတွင် အကြီးဆုံးဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် 1970 တွင် ဘက်ထရီခြောက်များကို စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ကျင့်ဝတ် | Panasonic_x000D_
မတ်ဆုရှိတ၏ တစ်နှစ်စာ ပို့ကုန်တန်ဖိုးသည် ဂျပန်ယန်း 100 ဘီလီယံကို ကျော်လွန်ခဲ့သည်
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံတွင် Philips Matsushita Battery ကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း
Panasonic နှင့် 10 နှစ်ကြာ လက်တွဲလာခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖိလစ်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင် Philips Matsushita Battery လုပ်ငန်းကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် D အရွယ်အစား Hi-Top ဘက်ထရီများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Panasonic ၏ နည်းပညာနှင့် ဖိလစ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ဥရောပဈေးကွက်တွင် အရည်အသွေးမြင့် ဘက်ထရီခြောက်အသစ်များ ထွက်ရှိလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အခြေခံ အကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။
နယူးယောက် စတော့ အိတ်ချိန်းတွင် စတော့များ စတင်ဖော်ပြခြင်း
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် Panasonic သည် နယူးယောက် စတော့ အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းသွင်းပေးရန် လျှောက်လွှာကို ပေးပို့ခဲ့သည်။ နယူးယောက် စတော့ အိတ်ချိန်းတွင် ဖော်ပြခံရရေး စံချိန်စံညွှန်းများသည် အလွန်အမင်း တင်းကျပ်သော်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များနှင့် အိတ်ချိန်းကော်မရှင်က ဒီဇင်ဘာလလယ်တွင် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး Panasonic ၏ ရှယ်ယာများကို နယူးယောက် စတော့ အိတ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်မှု စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ စာရင်းသွင်းခြင်းကြောင့် Panasonic ကို နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီအဖြစ် လူသိများလာခဲ့သည်။
Matsushita Electric (စင်ကာပူ) ကို တည်ထောင်ခြင်း
1970 ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ယန်းငွေသည် ပုံသေနှုန်း (1 USD = 360 yen) မှ အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲသည့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ခိုင်မာစေခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင် Panasonic သည် ကွန်ပရက်ဆာများကို တင်ပို့ရန် အဓိကနေရာတစ်ခုအဖြစ် စင်္ကာပူ မတ်ဆုရှိတလျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ရန် ဂျပန်ယမ်း2ဘီလီယံ၊ (ထိုအချိန်တွင် မကြုံစဖူး ငွေပမာဏ) အမေရိကန်ဒေါ်လာအားဖြင့် 17 သန်းနီးပါး ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
Panasonic ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ခြင်း
ရုပ်သံပညာရေး၏ အရေးကြီးပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာသင်ကြားပေးသူ ဆရာ/ဆရာမများ၏ သဘောထားများကို အပြည့်အဝသဘောတူလက်ခံကာ Panasonic ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းသည် ပြည်သူလူထု၏ ရှုထောင့်မှနေ၍ ရုပ်သံပညာရေးကို ပံ့ပိုးပေးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်အတွင်းတွင် ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကျောင်းပညာရေးတွင် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာများအပေါ် ပိုမိုအလေးပေးနိုင်ရန် လက်တွေ့ သုသေတနနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ယနေ့အထိ ကျောင်းပေါင်း 2,700 နီးပါးကို ကူညီပေးခဲ့သည်။
* 2013 ခုနှစ်အထိ စာရင်းအရ။
Quasar အီလက်ထရောနစ်ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် Motorola ၏ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Quasar အီလက်ထရောနစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် Quasar ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 1979 ခုနှစ်တွင် Quasar ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး 1995 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
စုစုပေါင်း ငွေကြေးတန်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း 100 တန်ဖိုးရှိသော ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများနှင့် လဲလှယ်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အကျိုးအမြတ်ငွေကြေးနှုန်းထားရရှိနိုင်သည့် ငွေချေးစာချုပ်များကို ထုတ်ရောင်းခြင်း
ပြည်ပ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို အားဖြည့်နိုင်ရန် စုစုပေါင်း ငွေကြေးတန်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း 100 တန်ဖိုးရှိသော ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများနှင့် လဲလှယ်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အကျိုးအမြတ်ငွေကြေးနှုန်းထား ရရှိနိုင်သည့် ငွေချေးစာချုပ်များကို ထုတ်ရောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများ အဓိကအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အများပြည်သူထံ စတော့ရှယ်ယာများကို ရောင်းချခဲ့သည်။ အဆိုပါ ငွေချေးစာချုပ်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြားတွင် အလွန်တရာ လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီး အမြန်အဆန်ပင် ရောင်းကုန်သွားခဲ့သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ National Electronic Components ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခြင်း
လက်တင်အမေရိကတွင် Panasonic ၏ ပထမဆုံး ဒေသခံ လုပ်ငန်းအဖြစ် ဘရာဇီးနိုင်ငံ National Electronic Components ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကွိုင်များ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ချိန်ညှိခလုတ်ဝိုင်းများ၊ စပီကာများနှင့် အခြားအရာများစွာကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် 1982 ခုနှစ်၌ ဥက္ကဌ တိုရှီဟီကို ယာမရှိတက စက်ရုံတစ်ခုကို လှည့်လည်စစ်ဆေးနေပုံကို ပြသထားသည်။
Matsushita Electronic Components ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခြင်း
ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းများကို ကောင်းမွန်စွာ တသမတည်း ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိပါက ကောင်းမွန်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို ရရှိလာနိုင်မည် မဟုတ်ပါ ဟူသော ကုမ္ပဏီ၏ ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံ သဘောထားခံယူချက်ဖြင့် Panasonic ၏ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင် 11 နေရာအပြင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး အစုစပ်ကုမ္ပဏီ ခြောက်ခုဖြစ်သော Fukui Matsushita Electric၊ Wakasa Matsushita၊ Tajima Matsushita၊ Tsuyama Matsushita၊ Yamaguchi Matsushita၊ Hokkaido Matsushita Electric အပါအဝင် အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် Panasonic သည် အခြားသုံးစွဲသူပေါင်းများစွာထံ များပြားသော စက်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ရေး အစုစပ်ကုမ္ပဏီ 11 ခုသည် ခွဲထွက်သွားခဲ့ပြီး သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ Matsushita Electronic Components ကုမ္ပဏီအဖြစ် ထင်ရှားသော အဆိုပါကုမ္ပဏီကို အသုံးများသော အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို အဓိက ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် မိမိဆန္ဒအလျောက် တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများအတွက် အဓိကကျသော နည်းပညာများကို ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် အရည်အသွေး၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Matsushita Household Equipment လုပ်ငန်းနှင့် Matsushita Industrial Equipment လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခြင်း
1977 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Panasonic သည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး ဌာနနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး ဌာနတို့တွင် အပြည့်အဝ အထူးပြုအာရုံစိုက်၍ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၎င်း၏ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးဌာနစိတ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး ဌာနစိတ်ကို ခွဲထုတ်၍ သီးခြားရပ်တည်စေခဲ့သည်။ Matsushita Industrial Equipment ကုမ္ပဏီကို ဓာတ်ငွေ့သုံး ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်ရေးဌာန၊ ရေနံဆီသုံး ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်ရေးဌာန၊ ရေပူပေးစနစ်၊ အပူပေးပစ္စည်းများနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် မီးဖိုများ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဌာနဟူသော ဌာနငါးခုအပြင် အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ သုတေသန လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Matsushita Industrial Equipment ကုမ္ပဏီကို ဂဟေဆော် စက်ပစ္စည်းဌာန၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး တိုင်းတာရေးပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် Matsushita Household Equipment ကုမ္ပဏီအား စတင်တည်ထောင်ပုံကို ပြသထားသည်။
တိုရှိဟီကို ယာမရှိတကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း
အဓိက အချိုးအကွေ့ကာလအတွင်းရှိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် နောက်ထပ် စီးပွားရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် 1977 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Panasonic ၏ ဥက္ကဌ အာရာတာရို တာကာဟရှိ အနားယူပြီး မဆဟာရု မတ်ဆုရှိတကို သဘာပတိအဖြစ်နှင့် တိုရှိဟီကို ယာမရှိတကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ကာ ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ လေးလံနှေးကွေးနေသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ထူးခြားသော ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းကြောင့် အာရုံစိုက်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုစရာ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
*ဤဓာတ်ပုံတွင် ဥက္ကဌ ယာမရှိတသည် ရှယ်ယာရှင်များနှင့် အထွေတွေ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာများကို နှုတ်ဆက်နေပုံကို ပြသထားသည်။
Matsushita Battery Industrial ကို တည်ထောင်ခြင်း
ဘက်ထရီများ၏ အနာဂတ်အတွက် များစွာ မျှော်မှန်းထားသည့် တည်ထောင်သူသည် မတူညီသော နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် ဘက်ထရီလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်လိုခဲ့သည်။ အတိအကျဆိုရသော သူသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘက်ထရီလုပ်ငန်းများကို ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ Matsushita Battery Industrial လုပ်ငန်းကို ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင် ဘက်စုံသုံး ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရေး ကုမ္ပဏီများအနက် တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် Matsushita Battery Industrial လုပ်ငန်း စတင်တည်ထောင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် အထွေထွေ ဘက်ထရီ ပြခန်းတစ်ခုကို ပြထားသည်။
မသန်စွမ်းသော ဝန်ထမ်းများအတွက် ကာတာနို မတ်ဆုရှိတ လူမှုဖူလုံရေး စက်ရုံတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနှစ်ကျင်းပမှုကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချလျက် မသန်စွမ်းသူများ၏ လူမှုဘဝ ဖူလုံရေးကို မြှင့်တင်ပေးရန် ကာတာနို မတ်ဆုရှိတကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မသန်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်များ အမှီအခိုကင်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပိုမို ပါဝင်နိုင်စေရန် မသန်စွမ်း ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် များစွာပါဝင်သော ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းကို အိုဆာကာ စီရင်စု၊ ကာတာနို မြို့မှ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းနှင့် Panasonic တို့၏ ရှယ်ယာရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အလုပ်အကိုင်ပေးအပ်မှု စနစ်မှ ထောက်ပံ့ငွေများဖြင့် မတည်ခဲ့သည်။ မသန်စွမ်းသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် သာမန်ဝန်ထမ်းအားလုံး ကြည်လင်ရွှင်ပျပြီး အဆင်ပြေသက်တောင့်သက်သာ ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
Springer National da Amazonia ကို တည်ထောင်ခြင်း
1976 ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဌ မဆာဟာရု မတ်ဆုရှိတ ဘရာဇီးနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ချိန်တွင် သူသည် ဒေသတွင်း တိုးတက်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို ဆွဲဆောင်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိနေသော နိုင်ငံ၏ အမေဇုန်မြစ် ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ဒေသရှိ Manaus မြို့ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ထိုနေရာတွင် လုပ်ငန်းတည်ထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် 1978 ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရှိ Springer Amazonia နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်ရေးကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် တိုးချဲ့လာခဲ့ပြီး အဆိုပါနှစ်တွင် Brazalian National Corporation နှင့် ပူးပေါင်းလျက် Springer National da Amazonia ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
* ပုံတွင် 1986 ခုနှစ် Springer National da Amazonia ၏ စက်ရုံများကို ပြသထားသည်။
ဟောင်ကောင်တွင် International Electric Fan Manufacturing ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခြင်း
International Electric Fan Manufacturing ကုမ္ပဏီကို ဟောင်ကောင်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Panasonic လုပ်ငန်းစု၏ ပထမဆုံး ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း စက်ရုံအဖြစ် မျက်နှာကျက် ပန်ကာများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဥရောပတွင် Matsushita Communication Deutschland အပါအဝင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများစွာ တည်ထောင်ခြင်း
ဂျပန်နှင့် ဥရောပကြား ကုန်သွယ်ရေး ပဋိပက္ခမြင့်တက်လာပြီး ရောင်းမစွံသည့်ပစ္စည်းများကို လျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းချမှုအား ဟန့်တားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဗီဒီယိုများ၊ ကား ရေဒီယိုနှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်သည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုကို ပြည်တွင်းတွင် အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ M.B. ဗီဒီယိုဖြင့် စတင်ခြင်း ဂျာမနီနိုင်ငံ Matsushita Communication Deutschland၊ Matsushita Business Machine (ဥရောပ)၊ Kyushu Matsushita Electric (ယူကေ)၊ Matsushita Communication Industrial (ယူကေ)၊ နှင့် Matsushita Graphic Communication Systems (ယူကေ) တို့ကို တည်ထောင်မှုများ ပါဝင်သည်။
ACTION 86 ကို သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဥက္ကဌ ယာမာရှိတက ကြေညာခြင်း
1978 ခုနှစ်မှ စတင်၍ သုံးနှစ်တာ နှစ်ဝက်စီမံချက်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ACTION 86 ဟုခေါ်သည့် သုံးနှစ်စာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အသစ်ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ ပြည်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ အားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပရှိ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို အထူးအာရုံစိုက်မည့် ဘက်စုံ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်အောင် လုပ်ရေမည့် နည်းလမ်းများကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် သမားရိုးကျ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် Panasonic သည် အမျိုးမျိုးသော ကိရိယာများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်များ၏ အနာဂတ်ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် နယ်ပယ်တွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို စတင်လေ့လာခဲ့သည်။.လုပ်ငန်း၏ သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မတ်ဆုရှိတ ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ခြင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မတ်ဆုရှိတ အီလက်ထရစ် ကော်ပိုရေးရှင်းကို တည်ထောင်ခြင်း 25 နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အဖြစ် အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အများပြည်သူ ပညာရေး စနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူ ကိုနိုဆုကိ မတ်ဆုရှိတ၏ စံနှုန်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ လူထုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမည်ဟူသော သူ၏ အတွေးအခေါ်များအောက်တွင် ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ပညာရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အရာရှိများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ လူမျိုး၊ လူမျိုးစု သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းသားအားလုံး ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရန် သေချာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ထိုပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရန် အထောက်အပံ့အမျိုးမျိုးကို ဆက်လက် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံး ငွေပေးချေရန် ကတိစာချုပ်ကို ထုတ်ပေးခြင်း
Panasonic ဘဏ္ဍာရေးဌာန (အမေရိက) ကို တည်ထောင်ပြီး ၎င်း၏ပထမဆုံး ဒေါ်လာ 10 သန်း တန်ဖိုးရှိသည့် ငွေပေးချေရန် ကတိစာချုပ်များ (CP) ကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ဤ CP သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အကြီးဆုံး အေဂျင်စီနှစ်ခုမှ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အတူ ရေတို ငွေချေးစာချုပ်များအတွက် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို တရားဝင် ရရှိခဲ့ပြီး ရှယ်ယာ ရယူရေး ရေတို ကုန်ကျစရိတ်များကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခဲ့သည်။ နောက်နှစ် မေလတွင် နယ်သာလန်နှင့် ယူကေတို့တွင် Panasonic ဘဏ္ဍာရေးဌာနကို တည်ထောင်ပြီး သြဂုတ်လတွင် ယူရို ဒေါ်လာ သန်း 100 တန်ဖိုးရှိသည့် CP ကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ထုတ်ပေးမှုကြောင့် ဂျပန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် အမြင့်ဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းဖြင့် ရန်ပုံငွေရရှိရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ရာ၌ အထူး အားဖြည့်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အာဂျင်တီးနားတွင် Fuego National ကို တည်ထောင်ခြင်း
1982 ခုနှစ် မက္ကဆီကို ငွေကြေးစနစ် အကျပ်အတည်းကာလက အစပျိုးပေးလိုက်သော အကြွေးတွင်းနက်သံသရာမှ ရုန်းထွက်ရန် ရည်မှန်းလျက်ရှိသော တောင်အမေရိကတိုက်တွင် နိုင်ငံများသည် စီးပွားရေး ကန့်သတ်ချက်များ ဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ ဖြေလျော့ပေးခြင်း မူဝါဒများကို စတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။ ထိုစိတ်ဓာတ်သဘောထားအားဖြင့် အာဂျင်တီးနား အစိုးရက လူဦးရေလျော့နည်းလာသော ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒတစ်ရပ်အဖြစ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းအကျိုးကျေးဇူး၏ ရလဒ်အနေဖြင့် အဆိုပါနှစ်တွင် Panasonic သည် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွင် Fuego National ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီသည် အော်ဒီယိုကုန်ပစ္စည်းများ စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အာကီယို တာနာအီကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း
အဆိုပါနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တိုရှီဟီကို ယာမရှိတသည် အကြီးတန်း အကြံပေးအရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ယူရန် ဥက္ကဌရာထူးမှ အနားယူခဲ့ပြီးနောက် အာကီယို တာနာအီက ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ နှစ်ဝက် စီမံချက် "ACTION 86" ကို ဒုတိယ ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့သော မစ္စတာ တာနာအီသည် OA၊ New AV၊ FA နှင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းအစီအစဉ် လေးခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူသည် " စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော လူသားတို့အတွက် အဆင့်မြင့် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ" ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။"
*ဓာတ်ပုံတွင် အာကီယို တာနာအီကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်သည့် အခန်းအနား၌ (ဝဲမှယာ) သဘာပတိ မဆာဟရု မတ်ဆုရှိတ၊ အကြံပေးအရာရှိ တိုရှီဟီကို ယာမရှိတနှင့် ဥက္ကဌ အာကီယို တာနာအီတို့ကို ပြသထားသည်။လုပ်ငန်း၏ သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
ဥရောပနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဌာနချုပ်အဖြစ် Panasonic Europe ကို တည်ထောင်ခြင်း
1992 ခုနှစ်တွင် ဥရောပ ကော်မရှင် ဈေးကွက်ပေါင်းစည်းခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုသောအားဖြင့် Panasonic သည် Matsushita Electric U.K. ကို ဥရောပနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဌာနချုပ်အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး Panasonic Europe ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Matsushita Electric Trading ကို ပေါင်းစည်းခြင်း
1988 ခုနှစ်တွင် ပြည်ပလုပ်ငန်းများ ကြီးထွားလာမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်လာမှုကြောင့် Panasonic နှင့် Matsushita Electric Trading ကို ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး ပေါင်းစည်းထားသော နိုင်ငံရပ်ခြား စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းကို စတင်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။လုပ်ငန်း၏ သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ပန်ကာ ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် သန်း 50 အထိ ရောက်ရှိလာခြင်း
1909 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Kawakita Electric Enterprise ကုမ္ပဏီသည် 1913 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ပန်ကာများကို ပြည်တွင်း၌ စတင်ဖြန့်ချိပြီးနောက် စွန့်ဦးတီထွင်သူအဖြစ် 1956 ခုနှစ်တွင် Panasonic အုပ်စုအောက်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ 75 နှစ်တာကာလအတွင်း Panasonic ၏ ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ပန်ကာထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက်မှာ စုစုပေါင်း သန်း 50 အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံတွင် 1988 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့သော "1/f Fluctuation" လျှပ်စစ်ပန်ကာကို ပြသထားသည်။
Matsushita Electric Asia ကို တည်ထောင်ခြင်း
1989 ခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း ၎င်း၏ပြည်ပလုပ်ငန်းကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပိုမိုအားဖြည့် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်စေရန် Mashita Electric (စင်ကာပူ)ကို Mashita Electric Asia အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအသစ်သည် အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ ပြည်ပကုမ္ပဏီများအတွက် အဓိက စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုင့် ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးတို့ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အဓိက ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော MCA ကို ဝယ်ယူခြင်း
Panasonic သည် Universal Pictures အစရှိသည်တို့နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများအဖြစ် အမေရိကန် ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် MCA ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ များပြားသော ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများနှင့် Panasonic AV လုပ်ငန်းကြားရှိ စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို အသုံးချခြင်းဖြင့် 21 ရာစုအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ပေါင်းစပ်မှုမှနေ၍ လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် ရည်မှန်းထားသော ကြီးမားသည့် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
*1995 ခုနှစ်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရောင်းချခဲ့ပြီး 2006 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို ရောင်းချခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း၏ သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာတမ်းကို ကြေညာခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများအပေါ် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အာရုံစိုက်မှုကို ခံလာရသည့်အတွက် Panasonic သည် လုပ်ငန်းအတွင်း ပထမဆုံး မူပိုင်ဖြစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံ မူဝါဒဖြစ်သည့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံမူဝါဒ၊ မတ်ဆုရှိတ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပဋိညာဉ်စာတမ်းကို စတင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ Panasonic အုပ်စုသည် ယင်းမူဝါဒအတိုင်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် 1993 ခုနှစ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဝင်ကြေညာချက်ကို ပြဌာန်းခြင်းနှင့် 1997 ခုနှစ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဌာနချုပ် တည်ထောင်ခြင်းတို့ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီသည် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုစလုံး၏ ရှုထောင့်မှနေ၍ တက်ကြွထက်သန်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်- Panasonic ၏ 2050 အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Hangzhou Kanamatsu Washing Machine၊ Beijing Matsushita Communication Equipment၊ Guangzhou Matsushita နှင့် Banba Irons တို့ကို တည်ထောင်ခြင်း
1990 ပြည့်နှစ်များတွင် တီဗွီ များနှင့် ဗီဒီယိုအောက်စက်များအတွက် ဝယ်လိုအား မြင့်မားလျက်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံကို အာရှပစိဖိတ်ဒေသနှင့်အပြိုင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဓိကနေရာတစ်ခုအဖြစ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်အတွင်း Hangzhou Kanamatsu Washing Machine၊ Beijing Matsushita Communication Equipment နှင့် Guangzhou Matsushita နှင့် Banba Irons ကုမ္ပဏီသုံးခုကို တည်ထောင်ပြီးနောက် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများကို တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Matsushita Storage Battery Corporation of America ကို တည်ထောင်ခြင်း
အလုံပိတ်ထားသော ခဲသတ္တု အားသွင်းထားနိုင်သည့် ဘက်ထရီများအတွက် အခြေစိုက် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် Matsushita Storage Battery Corporation of America ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1993 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီအမည်ကို Matsushita Battery Industrial of America အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Philips Matsushita Battery Poland ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic နှင့် Philips သည် Philips Matsushita Battery Poland ကို တည်ထောင်ရန် 50% စီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံတွင်း အခြေစိုက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ယခင် ကွန်မြူနစ် ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဇုန်တစ်ခုဖြစ်သော ဥရောပအလယ်ပိုင်းတွင် ခြေကုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ယိုအိချိ မိုရိရှိတကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း
ခဏသာ ခေတ်ကောင်းခဲ့သည့် စီးပွားရေးအခြေအနေများ လဲပြိုပျက်စီး၍ မြေဈေးများနှင့် စတော့ရှယ်ယာဈေးများ ထိုးကျပြီး စီးပွားရေးနာလန်ထရန် အသေအချာ ခက်ခဲမှုရှိနေချိန် အဆိုပါနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ယိုအိချိ မိုရိရှိတသည် ဥက္ကဌ တာနာအီထံမှ ဥက္ကဌရာထူးကို ဆက်ခံတာဝန်ယူခဲ့သည်။ "ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း" သို့ ဦးတည်လျက် Panasonic သည် ၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် "တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် အကြောက်အရွံ့ကင်းမှု" ဟူသည့် စာသားဖြင့် တက်ကြွထက်သန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ AVC ဌာနကို ရေရှည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဌာနချုပ်၏ နည်းပညာဌာနကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် "သုံးနှစ်တာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း" ကို စတင်ခဲ့ပြီး ဌာနခွဲများတွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို မြှင့်တင်ပြီးနောက် 1996 ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ရောင်းအားနှင့် အကျိုးအမြတ်များ တိုးတက်လာပြီး "ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး" ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် အဖွင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရသော ဥက္ကဌ မိုရိရှိတကို ပြသထားသည်။လုပ်ငန်း သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
Philipa ထံမှ Matsushita Electronic Corporation ရှယ်ယာအားလုံးကို Panasonic က ဝယ်ယူခြင်း
Panasonic သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ Philips ထံမှ Matsushita Electronic Corporation ရှယ်ယာအားလုံးကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ Matsushita Electronic Corporation သည် ယခင်အချိန်ကာလ 1952 ခုနှစ်တွင် Panasonic နှင့် Philips တို့ ပထမဆုံး ဖက်စပ်တည်ထောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ရှိ အဆင့်မြင့် ကုမ္ပဏီများနှင့် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟူသော အတွေးကို အခြေခံ၍ တည်ထောင်သူ ကိုနိုဆူကီ မတ်ဆုရှိတက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပနိုင်ငံရှိ ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီများထံ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကို လေ့လာကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် Matsushita Electronic Corporation ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူခြင်း အခမ်းအနားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနေပုံကို ပြသထားသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် မီးပူအလုံးရေ သန်း 100 ထုတ်လုပ်မှုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း
1927 ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော Panasonic ၏ အိမ်သုံး လျှပ်စစ်မီးပူသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ နိုင်ငံပေါင်း 60 ခန့်တွင် တစ်စတစ်စ လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ယခုနှစ်အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအားဖြင့် မီးပူအလုံးရေ စုစုပေါင်း သန်း 100 အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ 2015 ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပစ္စည်းတင်ပို့မှု အရေအတွက် စုစုပေါင်း သန်း 200 ထက် ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် 1927 ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့သော ပထမမျိုးဆက် Super Iron မီးပူကို ပြသထားသည်။
ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Matsushita Electric (တရုတ်) ကို တည်ထောင်ခြင်း
1990 ပြည့်နှစ်လယ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ တည်ထောင်လာခြင်းနှင့်အတူ Panasonic လုပ်ငန်းစုသည် ပိုမို အကျိုးရှိ၍ မီဒီယာမျိုးစုံသုံး ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်နှင့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းကူညီပံ့ပိုးမှု လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ပိုမို လိုအပ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် တင်းကျပ်သော ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါနှစ်တွင် ဥက္ကဌ မိုရိရှိတသည် ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် ဇူရုံကျိနှင့်အတူ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Panasonic သည် နိုင်ငံတွင်း ရရှိခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံဟောင်းကို အသိအမှတ်ပြုလျက် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်နေသော နိုင်ငံပေါင်းစုံတွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချမည့် Matsushita Electric (တရုတ်) ကို ပထမဆုံး ဘက်ပေါင်းစုံ ပံ့ပိုးကူညီပေးမည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
*Matsushita Electric (တရုတ်) သည် 2002 ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး၍ လုပ်ငန်းတွင် ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပြီး 2005 ခုနှစ်တွင် Panasonic China ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
Matsushita Household Equipment နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
Panasonic နှင့် Matsushita Household Equipment တို့ကို လုပ်ငန်းချင်း ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ပေါင်းစည်းရသည့် နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်းနှင့် ရေပူပေးပစ္စည်းများကို ဘက်စုံသုံးစနစ်များအဖြစ်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာမှုနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းတို့ ပေါင်းစပ်မှု၏ အရေးကြီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပေါင်းစည်းမှုသည် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်ခုစီကွဲပြားနေသော အိမ်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာ လုပ်ငန်းကို ဗဟိုကချုပ်ကိုင်၍ လုပ်ငန်းပိုင်းကိုအထူးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ကုန်ပစ္စည်း၏ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု၊ ရောင်းအားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံတို့ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ယခင် Matsushita Household Equipment နှင့် Panasonic ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ကို ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် Matsushita Household Equipment နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း အခမ်းအနားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနေပုံကို ပြသထားသည်။
Panasonic CIS ကို တည်ထောင်ခြင်း
CIS လုပ်ငန်း အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ဟယ်(လ်)ဆင်ကီးမြို့တွင် Panasonic CIS ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မော်စကို၊ ကိ(ဗ်)နှင့် အယ်(လ်)မတီ မြို့တို့တွင်လည်း ကိုယ်စားလှယ် ရုံးများကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းကနဦးလုပ်ဆောင်ချက်ပြီးနောက်တွင် ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ရန် ဒေသခံ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သော Panasonic Russia ကို 2005 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယင်းနောက် 2011 ခုနှစ်တွင် Panasonic Ukraine ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တီဗွီများကို အဓိက ရောင်းချခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းသည် ယခုအချိန်တွင် အိမ်သုံးပစ္စည်းများမှသည် လုပ်ငန်းအချင်းချင်း ကုန်သွယ်ရောင်းချမှုများလုပ်ဆောင်သည့် B2B အဆင့်ထိ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစွာကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ကြာ လုပ်ငန်းသည် ရုရှားနှင့် CIS နိုင်ငံများတွင် ခိုင်မာသော စီးပွားရေးခြေကုပ်များ ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖုန်းခေါ်စင်တာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု စတင်ခြင်း
ဂျပန်နှင့် မြောက်အမေရိကရှိ ဖောက်သည်များအတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖုန်းခေါ်စင်တာ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 365 ရက်ပတ်လုံး အသင့်ရှိသော ဖုန်းခေါ်စင်တာသည် လုပ်ငန်း၏ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ဤအဆင့်မြင့်သော ဖောက်သည် ပံ့ပိုးကူညီရေး ဝန်ဆောင်မှုသည် လူပြောများသော အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တီဗွီထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် သန်း 200 ပြည့်ခြင်း မှတ်တိုင်ကို ရရှိခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တီဗွီရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု မစတင်မီ တစ်နှစ်အလို 1952 ခုနှစ်တွင် Panasonic သည် အဖြူအမည်း တီဗွီများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်ကြာပြီး 1998 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု စုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ သန်း 200 ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း 2008 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် တီဗွီထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် သန်း 300 ထိရောက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် အရည်အသွေးမြင့်မားသော အလုံးသန်း 200 မြောက် T(tau) စီးရီမော်ဒယ် ဖလတ် တီဗွီအား တင်ပို့နေမှုကို ပြသထားသည်။
SD ကတ်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စံနှုန်းသတ်မှတ်မှုတို့အတွက် Toshiba နှင့် SanDisk တို့နှင့် ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်သော သဘောတူညီချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
ကုမ္ပဏီသည် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော သေးငယ်သည့် SD မမ်မိုရီကတ်ကို ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရန်၊ စံနှုန်းသတ်မှတ်ရန်နှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်ပြီး နှစ်ဦးအကျိူးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုကို Toshiba နှင့် SanDisk တို့နှင့်အတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် 2000 ခုနှစ်မှစ၍ 32 နှင့် 64 MB ဝင်ဆံ့သော မမ်မိုရီကတ်များ အများအပြား စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
*2000 ခုနှစ် CES (သုံးစွဲသူအတွက် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ပြပွဲ) တွင် SD မမ်မိုရီကတ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အပလီကေးရှင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို ကြော်ငြာခဲ့သည်။
ကူနီအို နာကာမူရကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း
IT တစ်ခေတ်ဆန်း ပြောင်းလဲလာမှု အခြေအနေသည် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် လူနေမှုဘဝပုံစံများကို အမြစ်မှလှန်၍ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်းတွင် ကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံကို 20 ရာစုမှ 21 ရာစုပုံစံသို့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါနှစ် ဇွန်လတွင် ကူနီအို နာကာမူရသည် ဥက္ကဌ မိုရိရှိတ နေရာတွင် အစားထိုးတာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဥက္ကဌ နာကာမူရသည် 2001 ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ 3-နှစ်တာ စီမံခန့်ခွဲမှု စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော "တန်ဖိုးဖန်တီးမှု 21 စီမံကိန်း" ကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းသည် "ထိပ်တန်း ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ" တစ်ခုအဖြစ်သို့ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲရန် (အုပ်စုတစ်ခုလုံး၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ပုံကို ပြောင်းလဲပြီး တိုးတက်မှုနည်းဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်) "ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနှင့် ဖန်တီးခြင်း" မူဝါဒကို ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ 21 ရာစုတွင် လူမှုအသိုင်းအဝန်းအတွက် Panasonic မှ အသစ်များ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးနိုင်စွမ်းကို ဖန်တီးရန် ဖြစ်ပါသည်။
*ဓာတ်ပုံတွင် သူ၏ ရာထူးအပ်နှင်းမှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မေးခွန်းများဖြေကြားပေးနေသော ဥက္ကဌ နာကာမူရကို ပြသထားသည်။
Matsushita Eco Technology Center ကို တည်ထောင်ခြင်း
ရင်းမြစ်များကို ထိရောက်စွာ သုံးစွဲမှုသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၏ အခြေခံ တာဝန်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ကို အခြေခံ၍ Matsushita Eco Technology Center ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် နောက်နှစ် ဧပြီလမှစတင်၍ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော အိမ်သုံး အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော ပြန်လည်တီထွင် အသုံးပြုနိုင်မှု နည်းပညာများကို ဖော်ဆောင်နေစဉ် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စင်တာသည် အိမ်သုံးပစ္စည်း စုစုပေါင်း 10 သန်းကို ပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
* 2008 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီအမည်ကို Panasonic Eco Technology Center ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် တီဗွီတပ်ဆင်သည့်စက်ရုံတွင် လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေသော သဘာပတိ မိုရီရှိတကို ပြသထားပါသည်။
Panasonic ဟောလီးဝုဒ် လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းကို တည်ထောင်ခြင်း
ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ ရုပ်ရှင်များကို ဖန်တီးသူများ တည်ရှိရာ ဟောလီးဝုဒ်တွင် Panasonic ဟောလီးဝုဒ် လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းကို ဧပြီလ၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။သင့်အိမ်ဆီ အရောက်လှမ်းမည့် ဟောလီးဝုဒ်
Matsushita Electronics Corporation ကို ဝယ်ယူခြင်း
Philips နှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကို 1993 ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် Matsushita Electronics Corporation သည် Panasonic မှ ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး 2001 ခုနှစ်တွင် ယင်းကုမ္ပဏီသည် Panasonic ၏ ရုံးတွင်း ဌာနခွဲအဖြစ် ရပ်တည်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Matsushita Communication Industrial၊ Kyushu Matsushita Electric၊ Matsushita Seiko၊ Matsushita Kotobuki Electronics Industries နှင့် Matsushita Graphic Communication Systems တို့ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ ဖြစ်လာခြင်း
Panasonic သည် Matsushita Communication Industrial၊ Kyushu Matsushita Electric၊ Matsushita Seiko၊ Matsushita Kotobuki Electronics Industries နှင့် Matsushita Graphic Communication Systems ကုမ္ပဏီငါးခုကို ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မူဝါဒကို အောက်တိုဘာလတွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ပန်ကာ ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် သန်း 100 အထိ ရောက်ရှိလာခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ပန်ကာကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သော Panasonic သည် 1913 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးပန်ကာကို ထုတ်လုပ်ချိန်မှစ၍ 90 နှစ်မြောက်၏ ဇွန်လတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ ဖြန့်ချိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
(လေယာဉ်တွင်း ဖျော်ဖြေရေးစနစ်) လေယာဉ်လုပ်ငန်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း
Panasonic သည် ခရီးသည်များအသုံးပြုရန် လေယာဉ်တွင်း ဖျော်ဖြေရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဖန်တီးတီထွင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်လျက် (လေယာဉ်တွင်း ဖျော်ဖြေရေးစနစ်) လေယာဉ်လုပ်ငန်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အသေးစားရေဒီယိုနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသော ကနဦးထုတ်ကုန်များသည် ဂုဏ်သတင်း မွှေးခဲ့ပြီး ယနေ့အခါ Panasonic သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လေကြောင်းလိုင်းပေါင်း 300 ကျော်ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနေပါသည်။ စနစ်များသည် နှစ်စဉ် ခရီးသည်ပေါင်း တစ်ဘီလီယံကျော်အတွက် သာယာနာပျော်ဖွယ် လေယာဉ်တွင်း ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းခဲ့ပါသည်။
* 1980 တွင် လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည့် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစနစ်များကို ပုံတွင်ပြထားသည်။ (အသံ၊ စာဖတ်မီးသီးနှင့် လေယာဉ်မယ်ခေါ်ဆိုသည့် စနစ်များ အပါအဝင်)
ဘက်ထရီခြောက် အလုံးပေါင်း 100 ဘီလီယံကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်း
Komori Dry Cell Batteries လုပ်ငန်းကို ဝယ်ယူပြီး 1931 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ 71 နှစ်အကြာ 2001 ခုနှစ်တွင် Panasonic သည် ဘက်ထရီခြောက် အလုံးပေါင်း 100 ဘီလီယံကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် 2010 ခုနှစ်တွင် အလုံးပေါင်း 150 ဘီလီယံကျော်လွန်ခဲ့သည်။
Matsushita Electric Works၊ PanaHome Corporation နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ မိခင်ကုမ္ပဏီမှ အပြည့်အဝချုပ်ကိုင်သော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်လာခြင်း
Panasonic သည် 2004 ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် Matsushita Electric Works နှင့် PanaHome Corporation တို့၏ နောက်ထပ်ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အခြားအဖွဲ့ဝင် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ၎င်းတို့ကို မိခင်ကုမ္ပဏီမှ အပြည့်အဝချုပ်ကိုင်သော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ ထားရှိရန်လိုအပ်သော ကုမ္ပဏီ၏ စံနှုန်း အသစ်များပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ အုပ်စုတစ်ခုတည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မျှဝေအသုံးပြုခြင်း၊ ရှိထားသော တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်လျက် Panasonic သည် စက်တင်ဘာလတွင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ Panasonic သည် ၎င်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကို Panasonics အဖြစ် ပေါင်းစည်းရန်နှင့် ၎င်း၏ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို Matsushita Electric Works အဖြစ်သို့ ပေါင်းစည်းရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
*နောက်ပိုင်းတွင် Matsushita Electric Works ကို Panasonic Electric Works ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ 2012 ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် Eco Solutions (ဂေဟစနစ် ဖြေရှင်းချက်များ) ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အိမ်သုံး ရေခဲသေတ္တာများကို 100% CFC မပါသော ရေခဲသေတ္တာများအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခြင်း
ရေခဲသေတ္တာတိုင်းတွင် ပါဝင်သော အအေးဓာတ်ထုတ်လွှတ်သည့် ဖရီယွန်သည် အိုဇုန်းလွှာကို ဖျက်စီးပစ်သောကြောင့် 1990 ပြည့်နှစ်များ၏ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် CFC ကို အစားထိုး အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အစားထိုးပစ္စည်း CFC သည် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အခက်တွေ့စေသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ Panasonic သည် ယင်းဖြစ်ရပ်ကို အလျင်အမြန် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး 2001 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး CFC အသုံးမပြုသော ရေခဲသေတ္တာကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ နောက်သုံးနှစ်ကြာ 2004 ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလတွင် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် 100% CFC အသုံးမပြုသော အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာများကို အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် "Technics" အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကျစ်လစ်သေးငယ်သော စပီကာတစ်ခုကို စတင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
Technics အမှတ်တံဆိပ်ကို "Technics 1" EAB-1204 စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စပီကာ အငယ်စားများတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ဖုန်စုပ်စက် ထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် စုစုပေါင်း သန်း 100 အထိ ရောက်ရှိလာခြင်း
1958 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ဖုန်စုပ်စက်ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပြီးနောက် 47 နှစ်မြောက်သည့်နှစ်၏ အောက်တိုဘာလတွင် Panasonic သည် ဖုန်စုပ်စက် ထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် သန်း 100 ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
Matsushita Industrial Information Equipment ဖြင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
ဗဟိုစနစ်ဖြင့် စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်သော စက်ပစ္စည်းများ၊ မြင့်မားသော ဗို့အားကို လက်ခံ၍ ဖြန့်ဝေပေးသော စက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုအားကောင်းစွာ ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရန် 2005 ခုနှစ် ဧပြီလ 1 ရက်နေ့တွင် Panasonic သည် Matsushita Industrial Information Equipment နှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ၏ 10 နှစ်တာ မျှော်မှန်းချက်ကို ကြေညာခြင်း
Panasonic သည် နောင်လာမည့် 10 နှစ်တာအတွက် ၎င်း၏သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာ၏ ကြိုတင်မျှော်မှန်းချက်အဖြစ် ပင်မဒေါက်တိုင်နှစ်ခုဖြစ်သည့် မှတ်ဉာဏ်တု (AI) စနစ်၊ အာရုံခံခြင်းနှင့် UI/UX ကို အသုံးပြုထားသော IoT/စက်ရုပ်နည်းပညာရပ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်ပေးထားနိုင်သော၊ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာများအသုံးပြုထားသော စွမ်းအင်တို့အပေါ် အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခဲ့သည်။[Topics] Panasonic က ၎င်း၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ၏ အယူအဆကို ကြေညာခဲ့ပြီး "သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ၏ 10 နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်" ဝဘ်ဆိုက်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် (2016 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 11 ရက်)
ကုန်ပစ္စည်း 31,400 အတွက် ဥရောပ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် RoHS နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း
* ညွှန်ကြားချက်အရ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသည့် အရာဝတ္ထုများကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်းအား တားမြစ်ခဲ့ပြီး ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို 2006 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဥရောပသမဂ္ဂက သတ်မှတ်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ Panasonic သည် 2015 ခုနှစ်မှစ၍ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် တင်ပို့မည့် ကုန်ပစ္စည်းမှန်သမျှတွင် အဆိုပါ တားမြစ်ထားသည့် အရာဝတ္ထုများကို အသုံးမပြုရန် မူဝါဒတစ်ခုကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကြိုတင်သတိရှိစွာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
* လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော အရာဝတ္ထုအချို့ အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခြင်း (RoHS)။
ဖူမီအို အိုဆုဘိုကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း
အဆိုပါနှစ် ဇွန်လတွင် ဥက္ကဌ နာကာမူရ အနားယူပြီးနောက်တွင် ဖူမီအို အိုဆုဘိုက ဥက္ကဌဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် "ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ခြင်း" မူဝါဒကို သတ်မှတ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ယခင် ဥက္ကဌဖြစ်သူ ကူနီအို နာကာမုရကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ယိုအိချိ မိုရိရှိတကို အမှုဆောင် အကြံပေးအရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
* ဖေဖော်ဝါရီလ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီး၌ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြသော ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌ နာကာမူရနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အိုဆုဘုတို့ကို ဓာတ်ပုံတွင် ပြသထားသည်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လေအေးပေးစက် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ကွန်ပရက်ဆာ ထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် စုစုပေါင်း သန်း 200 အထိ ရောက်ရှိလာခြင်း
2006 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင် Panasonic ၏ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လေအေးပေးစက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ကွန်ပရက်ဆာ ထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သန်း 200 သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Matsushita Refrigeration Company ဖြင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
1952 ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထည့်ဝင်ပေါင်းစည်းခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်ခဲ့သော Nakagawa Electric Company သည် ၎င်း၏အမည်ကို Matsushita Refrigeration ဟု ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ရေခဲသေတ္တာများ၊ ငွေအကြွေထည့်လိုက်လျှင် စားဖွယ်သောက်ဖွယ်များ ထုတ်ပေးသည့်စက်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများကဲ့သို့ ရေခဲသေတ္တာစက်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Matsushita Home Appliance နှင့် Matsushita Food Systems တို့နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီသည် အိမ်သုံးပစ္စည်းရောင်းချရေး အုပ်စု (Home Appliance Group) အဖြစ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် Matsushita Electric Industrial ၏ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့် လေအေးပေးစက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ဌာနများကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Matsushita Home Appliance ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်နှင့်အညီ 2008 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 1 ရက်နေ့တွင် ၎င်းသည် Matsushita Electric Industrial အတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ အမည်ကို "Panasonic Corporation" ဟု ပြောင်းလဲခြင်း
2008 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီသည် Matsushita Electric Industrial တည်ထောင်ခြင်း နှစ် 90 ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ၎င်း၏ အမည်ကို "Panasonic Corporation" ဟု ပြောင်းလဲကာ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကို "Panasonic" အမည်အောက်တွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအမည် ပြောင်းလဲမှု၏ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ် 1918 ခုနှစ် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါး လူသိများခဲ့သော "Matsushita" အမည်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း မရှိတော့ပါ။
*တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် လွှမ်းမိုးမှု တန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအားဖြင့် ကုမ္ပဏီအမည်ကို "Matsushita Electric"ဟု ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။[Press Release] Matsushita Electric ဟူသောအမည်ကို Panasonic Corporation ဟု ပြောင်းလဲခြင်း
Matsushita Battery Industrial ဖြင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
2003 ခုနှစ်တွင် ရှယ်ယာလဲလှယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သော လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည့် Matsushita Battery Industrial ကို 2008 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Panasonic လုပ်ငန်းထဲသို့ ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Automotive Systems ကုမ္ပဏီ၊ Device ကုမ္ပဏီ၊ Energy ကုမ္ပဏီ၊ Manufacturing Solutions ကုမ္ပဏီ၊ Panasonic Cycle Technology နှင့် Panasonic Polytechnology တို့ကို ပေါင်းစည်းပြီး Automotive & Industrial Systems Company ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး တီဗွီထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် စုစုပေါင်း သန်း 300 သို့ ရောက်ရှိခြင်း
1985 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် သန်း 100 နှင့် 1998 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် သန်း 200 ရရှိပြီးနောက်တွင် Panasonic သည် ပထမဆုံး တီဗွီကို စတင်ထုတ်လုပ်သည့် 1952 ခုနှစ်မှစ၍ 56 နှစ်ကြာ 2008 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တီဗွီထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် သန်း 300 ပြည့်မှတ်တိုင်ကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ Panasonic အမှတ်တံဆိပ်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ သုံးစွဲသူများထံ National အမည်အောက်တွင် တီဗွီအလုံးရေ သန်း 100 နှင့် Panasonic အမည်အောက်တွင် တီဗွီအလုံးရေ သန်း 200 ထုတ်လုပ်ရောင်းချ၍ ပုံရိပ်များကို ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါသည်။
* အမှတ်တံဆိပ်အလိုက် စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက် (National- 105 သန်း / Panasonic- 195 သန်း)
SANYO Electric ကုမ္ပဏီ လီမိတက်နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ Panasonic ၏ ပေါင်းစည်းထားသော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာခြင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် Panasonic သည် "SANYO Electric ကုမ္ပဏီ လီမိတက်" နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ၏ အဓိက စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဲပေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် Panasonic ၏ ပေါင်းစည်းထားသော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Tesla Motors နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
Panasonic သည် Telsa Motors နှင့် လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကြေညာခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ယာဉ်များအတွက် နောက်မျိုးဆက်သစ် ဘက်ထရီများ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် Panasonic သည် EV လီသီယမ် အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို တိုးချဲ့ပံ့ပိုးရန် Telsa နှင့်အတူ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ 2014 ခုနှစ်တွင် Panasonic နှင့် Telsa တို့သည် ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး လီသီယမ် အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ စက်ရုံဖြစ်သော Gigafactory ကို ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စတင်ခဲ့သည်။ [Press Release] Panasonic နှင့် Tesla တို့ Gigafactory အတွက် သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း (2014 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 31 ရက်)
Panasonic Electric Works လုပ်ငန်းနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
Panasonic သည် 2011 ခုနှစ်တွင် Panasonic Electric Works ၏ ရှယ်ယာများကို ဖလှယ်ဝယ်ယူပြီးနောက် ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ကာ 2012 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Panasonic က ထိုကုမ္ပဏီနှင့် ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ ဤသို့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် Panasonic Electric Works ကို အုပ်စုကိုးခုနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာန တစ်ခု ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ် ကူးပြောင်းခဲ့သည်။[Press Release] Panasonic က (Panasonic Electric Works Co., Ltd.) ကို ရာနှုန်းပြည့် တစ်ဦးတည်းပိုင် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရယူလိုက်ခြင်း (2011 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ 31 ရက်)
ကဇုဟိရို ဆုဂကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း
ကဆုဟိရို ဆုကသည် အဆိုပါနှစ်၏ ဇွန်လ 27 ရက်နေ့တွင် Panasonic Corporation ၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဥက္ကဌဟောင်း ဖုမိအို အိုဆုဘိုကို သဘာပတိ အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း။Panasonic CEO ၏ ပရိုဖိုင်
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဝတ်လျှော်စက် ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် သန်း 100 အထိ ရောက်ရှိလာခြင်း
1951 စက်တင်ဘာတွင် ထုတ်လုပ်မှုများ စတင်ခဲ့သည့် Panasonic Corporation Appliances လုပ်ငန်းသည် 2013 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ 23 ရက်တွင် အဝတ်လျှော်စက် အလုံးရေ သန်း 100 ထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်သို့ တည်ထောင်သူ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက် စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကို မြင်ခဲ့ရာမှ Panasonic ၏ အဝတ်လျှော်စက် သမိုင်းကြောင်း စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အိမ်ရှင်မများကို များပြားလှသော အိမ်မှုကိစ္စဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှ လွတ်မြောက်စေမည့် အရေးပါသည့် ထုတ်ကုန် တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းက ယူဆခဲ့သည်။ ဤစိတ်ကူးကို အခြေခံသည့် သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ ကုန်ပစ္စည်းကို စတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ 1951 ခုနှစ်တွင် အိုဆာကာရှိ စက်ရုံပေါင်း 13 ခု၌ "လှုပ်ခါမွှေနှောက်လျှော်ဖွပ်သည့် အမျိုးအစား အဝတ်လျှော်စက်" ကို စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 1950 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကတည်းက ဂျပန်ဈေးကွက်အတွင်း စွမ်းရည်ပြည့် အဝတ်လျှော်စက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင်ရောင်းချခဲ့ရာ 1972 ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း အလုံးရေ 10 သန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး 1998 တွင် သန်း 50 အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် တရုတ်နှင့် အခြား အာဆီယံဒေသများတွင်လည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ 15 နှစ်အတွင်း အလုံးရေ သန်းပေါင်း 50 မှ သန်း 100 ထိ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။
တူရကီ မီးခလုတ်များ၊ ပလတ်ပေါက်များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ViKO သည် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခြင်း
အောက်တိုဘာလတွင် Panasonic သည် မီးခလုတ်များ၊ ပလတ်ပေါက်များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် တူရကီရှိ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီဖြစ်သော ViKO နှင့်အတူ စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူမှု သဘောတူညီချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Panasonic သည် တူရကီဈေးကွက်နှင့် ၎င်း၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် အလယ်အလတ်မှသည် ရေရှည် တိုးတက်မှုဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီး မီးခလုတ်များ၊ ပလတ်ပေါက်များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဗို့အားနိမ့် ဆားကစ် ပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အဦများနှင့် အလိုအလျောက် စနစ်များနှင့် စမတ်မီတာများကဲ့သို့သော လျှပ်စစ် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝချဲ့ထွင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။
Blu-ray စီဒီချပ် (BD) စံနှုန်းကို စတင်သတ်မှတ်ခြင်း
Panasonic အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ ကိုးခုသည် ဗီဒီယိုရုပ်သံဖမ်းယူသည့် စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် Blu-ray စီဒီချပ် စံနှုန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ အလွှာများစွာ ထည့်သွင်းထားသည့် စီဒီချပ်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေခဲ့သည်။ HD ပုံရိပ်ကြည့်ရှုနိုင်မှုကဲ့သို့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် အဆင့်မြင့်မားသော သတ်မှတ်ချက်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့် ဒေတာသိမ်းဆည်းရန်အပြင် အခြားနည်းမျိုးစုံဖြင့်လည်း အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။
Matsushita Electric France ကို တည်ထောင်ခြင်း
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော Panasonic ၏ ပထမဆုံး အရောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ် Matsushita Electric France ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပြင်သစ်ဈေးကွက်အတွင်း အဓိက ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို စတင်ခဲ့သည်။
Central Europe Matsushita တီဗွီကို တည်ထောင်ခြင်း
အနောက်ဥရောပအပြင် Panasonic သည် အရှေ့ဥရောပနှင့် CIS ဈေးကွက်များတွင် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း များပြားသော တီဗွီဝယ်လိုအားကို ဖြည့်စွမ်းနိုင်ရန်နှင့် ဗြိတန်နိုင်ငံပြီးနောက် အကြီးမားဆုံး တီဗွီထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ရန် Central Europe Matsushita တီဗွီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပထမဆုံး ဝင်ရောက်လာသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား အစိုးရမှ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် Panasonic သည် လုပ်ငန်းကို အချိန်တိုအတွင်း စတင်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး တီဗွီမော်ဒယ် အမျိုးအစား 50 ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Ene EcologyNet Europe ကို တည်ထောင်ခြင်း
Ene EcologyNet Europe ဟု အမည်ပေးထားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် Panasonic ၏ ပထမဆုံး အဓိကလုပ်ငန်းကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ဝီး(ဇ်)ဘာဒန်မြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု မြင့်မားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သည့်နည်းတူပင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဥပဒေကို လိုက်နာရန်အတွက် အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုရေး လုပ်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများကြားတွင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည်။
Matsushita Electric (ထိုင်ဝမ်) ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic ထံမှ နည်းပညာအကူအညီများ ရယူ၍ ရေဒီယိုများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ဒေသခံ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု၏ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Matsushita Electric (ထိုင်ဝမ်) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများကို အသုံးပြု၍ ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုး ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်များတွင် ပထမတန်းစား ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် နည်းပညာ သို့မဟုတ် ငွေကြေးအရင်းအနှီးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကူအညီကို မလိုအပ်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်လာရန်ဖြစ်သော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် သုံးခုကို ပြည့်မီစေရန် ရွယ်ရွယ်ထားရှိကြောင်း ထိုင်ဝမ်အစိုးရကို ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသို့တည်ထောင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Panasonic ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ဝယ်လိုအားမှာ လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 4၊5နှစ်အတွင်းမှာပင် ယင်းကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ကုန်ပစ္စည်းများတွင် တီဗွီများမှသည် ထမင်းပေါင်းအိုးများ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များနှင့် အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများအထိပင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
National Gobel ကို တည်ထောင်ခြင်း
1970 ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရက ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို တည်ထောင်ခွင့်ပေးလိုက်သည့်အချိန်တွင် ဂျပန် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများစွာသည် တရုတ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်း Panasonic သည် ပြည်ပဈေးကွက် ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၎င်း၏စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ "အိမ်ရှင်နိုင်ငံကို စိတ်ကျေနပ်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု" မိမိကိုယ်ကိုယ်အဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့သည်။ Panasonic သည် မစ္စတာ ဂိုဘယ်ကို အကျိုးတူပူးပေါင်းမည့် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်တစ်ဦးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် Panasonic နှင့် နှစ်ပေါင်း 10 နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်ငန်းဆက်နွှယ်မှုရှိထားသော အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော National Gobel ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Matsushita Electronic Components (မလေးရှား) နှင့် Matsushita Industrial Corporation တို့ကို တည်ထောင်ခြင်း
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် တန်အဗ္ဗဒူ ရာဇက်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရန် တောင်းဆိုမှုကြောင့် Matsushita Industrial Corporation (လေအေးပေးစက် တင်ပို့ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်း) နှင့် the Matsushita Electronic Components (အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ) ကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးချုပ်သည် 1973 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော ကုမ္ပဏီ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တည်ထောင်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
Matsushita Communication Industrial ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် Matsushita Communication Industrial ကို တည်ထောင်ရန် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ဌာနကို သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် 1960 ခုနှစ်တွင် ယိုကိုဟားမားမြို့၌ စက်ရုံသစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံးစက်များ ထုတ်လုပ်ရေးနယ်ပယ်သို့ ကုမ္ပဏီသစ်တစ်ခုအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Panasonic အသံဖမ်းစက် ထုတ်လုပ်ရေးဌာနတည်ထောင်ရန် ကိုဒိုးမစက်ရုံတွင် အခြေစိုက်တည်ရှိသော တိပ်အသံဖမ်းစက်ထုတ်လုပ်ရေး ဌာနကို ထပ်မံခွဲထုတ်ခဲ့သည်။
Matsushita Gobel Battery Indonesia ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Gobel Battery Indonesia ကို တည်ထောင်ရန် Matsushita Gobel Battery Industry နှင့် Panasonic Battery Indonesia တို့ကို ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
Panasonic Electric Works နှင့် Sanyo Electric တို့ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း
2010 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းမူဝါဒ ကြေညာချက်တွင် Panasonic ဥက္ကဌ ဖူမီအို အိုဆုဘိုသည် ၎င်း၏ " အီလက်ထရောနစ်လုပ်ငန်းတွင် No.1 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပြု တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အဖွဲ့အစည်း" ဖြစ်လာရေးဟူသော နှစ် 100 ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မျှော်မှန်းချက်ကို ရရှိရန် ကုမ္ပဏီ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် 2011 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Panasonic Electric Works နှင့် Sanyo Electric တို့ကို လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအဖြစ် ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 2012 ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ Panasonic လုပ်ငန်းစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖောက်သည်များ၊ ဖြေရှင်းချက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများဟူသော နယ်ပယ်သုံးခုအဖြစ်သို့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး စနစ်သစ်တစ်ခုဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်- ဓာတ်ပုံတွင် 2010 ခုနှစ် ဂျူလိုင်လတွင်ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ SANYO Electric ဥက္ကဌ ဆာနို (ဝဲ)၊ Panasonic ဥက္ကဌ အိုဆုဘု (လယ်) နှင့် Panasonic Electric Works ၏ ဥက္ကဌ နာဂါအီ (ယာ) တို့ အတူတကွ လက်တွဲ၍ ဆုပ်ကိုင်ထားကြပုံကို ပြသထားသည်။လုပ်ငန်း သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
National Panasonic Korea ကို တည်ထောင်ခြင်း
Asia Matsushita Electric အား ဒေသဆိုင်ရာရုံးချုပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Asia Matsushita Electric ကို ဒေသဆိုင်ရာရုံးချုပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် Panasonic Asia Pacific ကို စတင်မှုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
Panasonic Vietnam ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Vietnam နှင့် Matsushita Home Appliances Vietnam အား ရုပ်သံပစ္စည်းများနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများအသီးသီးထုတ်လုပ်ရန် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 2005 ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နက်အစိုးရက 100% အပြည့် နိုင်ငံခြားသားပိုင် ဦးပိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ် အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Panasonic Vietnam အား ပေါင်းစည်းထားသော ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
MECA ၏ ရုံးချုပ်အား နယူးဂျာစီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်း
Matsushita Electric Corporation of America ရုံးချုပ်အား နယူးယောက်မြို့မှ နယူဂျာစီပြည်နယ်၊ ဆီကောကပ်စ်မြို့၏ မဲဒေါင်လန်းစ်ရှိ စက်ရုံသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။
Matsushita Industrial de Baja California ကို မက္ကဆီကိုတွင် တည်ထောင်ခြင်း
* ဓာတ်ပုံတွင် တည်ထောင်သူ ကိုနိုဆူကီ မတ်ဆုရှိတသည် Matsushita Industrial de Baja California သို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေခြင်းကို ပြသထားပါသည်။
Matsushita Avionics Delelopment Corporation ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် လေယာဉ်လုပ်ငန်း (လေယာဉ်တွင်းဖျော်ဖြေမှုစနစ်) နယ်ပယ်သို့ 1979 ခုနှစ်တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Matsushita Avionics Development Corporation ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အာဗင်မြို့တွင် 1990 ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များ အသုံးပြုနိုင်မည့် ဖျော်ဖြေရေးစနစ်ကို တည်ထွင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝန်ထမ်း တစ်ဒါဇင်ဝန်းကျင်ဖြင့် လုပ်ငန်း စတင်ခဲ့ပါသည်။
အီရန်နှင့် ကူဝတ်နိုင်ငံများရှိ အေဂျင်စီးများနှင့် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးသွားပြီးနောက် 1952 ခုနှစ်အတွင်း အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဈေးကွက်ကို မြှင့်တင်ပေးမည့် ထုတ်ကုန်များ အတော်နည်းနေသေးသော်လည်း Panasonic သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်အတွင်းသို့ အလျင်အမြန် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ Panasonic သည် အခြားကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်သည့် သွပ်ပြား၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းနှင့် ဓာတ်ဗူးများကိုအသုံးပြုပြီး အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်းများကို စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကုမ္ပဏီသည် မီးပူ၊ ပန်ကာ၊ အိတ်ဆောင်ရေဒီယိုကဲ့သို့သော ပို့ကုန်ပစ္စည်းများကို စတင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနှစ်တွင် အီရန်၊ အီရတ်၊ ဘာရိန်းနှင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အေဂျင်စီများအားရွေးချယ်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အာဖရိကနိုင်ငံ၏ အဓိကဈေးကွက်များကို စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
အာဖရိကတိုက်၏ အဓိကဈေးကွက်များတွင် ခြောက်လကြာ ဈေးကွက်စစ်တမ်းကောက်ယူလေ့လာခဲ့ပြီး နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်တွင်းဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဘက်ထရီသုံး အထူးရေဒီယိုအမျိုးအစားဖြစ်သော BT-152 ကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုပစ္စည်းသည် ဈေးကွက်ထဲတွင် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပြီး ပို့ကုန်အဖြစ် အဓိက တင်ပို့ရောင်းချရသည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရုံးချုပ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို Matsushita Electric Trading သို့ ပြောင်းလဲခြင်း
နိုင်ငံခြားရုံးချုပ်များအား Matushita Electric Trading အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး မြောက်အမေရိကရုံးချုပ်၊ လက်တင်အမေရိကရုံးချုပ်၊ ဥရောပရုံးချုပ်၊ အာရှနှင့်သမုဒ္ဒရာပိုင်းဒေသရုံးချုပ်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကရုံးချုပ်အဖြစ် ဒေသ5ခုခွဲခဲ့ပါသည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံး အရှေ့အလယ်ပိုင်း အရောင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော Panasonic Gulf ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း
ဒေသခံကုမ္ပဏီကို 1990 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရုံးချုပ်ကို 1991 ခုနှစ်တွင် ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ပထမဆုံးအရောင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော Panasonic Gulf ကုမ္ပဏီကို ယူအေအီးနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ပြန်လည် တင်ပို့ရောင်းချမှုများ စတင်ခဲ့ပါသည်။
ယူအေအီးတွင် Panasonic Marketing Middle East ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခြင်း
ပြည်တွင်းဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒဖြစ်သော "ပို့ကုန်နှင့် အရောင်းဆောင်ရွက်ချက်များအား ဈေးကွက်နှင့် အနီးဆုံးနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း" ကို အခြေခံပြီး Panasonic Marketing Middle East ကုမ္ပဏီကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ အရောင်းအခြေစိုက်ဌာနအဖြစ် ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Panasonic AP China ကို စတင်တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic AP China ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်းနှင့် ပေါင်းစည်းလျက် ကုမ္ပဏီအသစ်အဖြစ် ကျဲဂျိယန် ပြည်နယ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒါလီယန်းပြည်နယ်တွင် မော်တော်ကားများအတွက် လီသီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သော စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း
မော်တော်ကားများအတွက် လီသီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သော စက်ရုံသစ်တစ်ရုံကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒါလီယန်းပြည်နယ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် Panasonic ၏ ပထမဆုံးမော်တော်ယာဉ်သုံး ဘက်ထရီများထုတ်လုပ်သော ထုတ်လုပ်ရေး အခြေစိုက်နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။[Press Release] Panasonic သည် တရုတ်နိုင်ငံ ဒါလီယန်တွင် မော်တော်ယာဉ်သုံး လီသီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီစက်ရုံအသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း(2017 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 27 ရက်)
ကိုစတာရီကာတွင် National Centroamericana ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် တောင်အမေရိကဒေသတွင် ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအဖြစ် ကုမ္ပဏီမှ 100% အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားသည့် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ National Centroamericana ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် ဘက်ထရီခြောက်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခဲ့ပါသည်။
Matsushita Electric Panama ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Salvador ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Guatemala ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic Mexico ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် 1965 ခုနှစ်တွင် မက္ကဆီရှိ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်ထားသော National Mexicana တွင် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်ရှယ်ယာများကို 1977 ခုနှစ်တွင် ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုရှိစေရန်အတွက် Panasonic သည် မက္ကဆီအစိုးရနှင့် စတင်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး ထိုနှစ်မှာပင် Panasonic Mexico ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအသစ်သည် ရေဒီယိုကက်ဆက်များ၊ အသံဖမ်းစက်များ၊ တီဗွီနဲ့ အခြား အစိတ်အပိုင်းများကို စတင်ထုတ်လုပ်ဈေးကွက်တင်လာခဲ့ပါသည်။
* ဓာတ်ပုံတွင် 1987 ခုနှစ်တွင် အသံနားထောင်စက်အား ပထမဆုံးပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သော အခမ်းအနားကို ပြသထားပါသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် Springer National Electronic Components ကို တည်ထောင်ခြင်း
Springer Panasonic Amazonia ကို တည်ထောင်ခြင်း
Springer Panasonic da Amazonia ကို တည်ထောင်ရန် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ Springer National da Amazonia နှင့် Springer National Electronic Components တို့ကို ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မီယာမီဒေသတွင် လက်တင်အမေရိကစင်တာကို တည်ထောင်ခြင်း
ရုံးချုပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်အချို့အား လက်တင်အမေရိက စင်တာအနီးရှိ မီယာမီသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် လက်တင်အမေရိက စင်တာကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ 1998 ခုနှစ်တွင် အဆိုပါလုပ်ငန်းအား သီးခြားကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သော Matsushita Electric Latin America အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါသည်။
Panasonic Centroamericana တည်ထောင်ရန် လက်တင်အမေရိကကုမ္ပဏီ3ခုကို ပေါင်းစည်းခြင်း
1988 တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Costa Rica Panasonic ကို 2000 ခုနှစ်တွင် Guatemala Panasonic ၊ El Salvador Panasonic တို့နှင့် ပေါင်းစည်းပြီး Panasonic Centroamericana ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
Panasonic Peruana S.A. ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Peru နှင့် Panasonic Peru တို့ကိုပေါင်းစည်းပြီး Panasonic Peruana S.A. ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Matsushita Electronic Components Amazonia ကို တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Mexico ကို Panasonic Mexico နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
ကနဦး လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန် အလုပ်အမှုဆောင် သုံးဦးကို ဥရောပနှင့် အမေရိကသို့ စေလွှတ်ခြင်း
တည်ထောင်သူ ကိုနိုဆူကီ မတ်ဆုရှိတသည် နောက်ပိုင်းတွင် အကြီးတန်းနည်းပညာအကြံပေး ဖြစ်လာသော တက်ဆုဂျိရို နာကာအိုဦးဆောင်သော အလုပ်အမှုဆောင်သုံးဦးအဖွဲ့အား ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံးလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဥရောပတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဂျာမနီ၊ ယူအေ၊ ပြင်သစ်နှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင် Siemens နှင့် အခြားစက်ရုံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးစဉ်သည် ဥရောပဒေသတွင် Panasonic ခြေဆန့်နိုင်စေရန် လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပထမဆုံး ဂျပန်-ဖိလစ်ပိုင် ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် အရင်းအနှီး မျှဝေသည့် လုပ်ငန်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း
1967 ခုနှစ်တွင် Panasonic သည် Precision Electronics Corporation (PEC, ယခု Panasonic Manufacturing Philippines) အပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းလေးခုထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေနေခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သူ အေရာတာရို တာကာဟာရှိသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ အလားအလာကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် PEC နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် တီဗွီများနှင့် စတူဒီယိုသုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှု စတင်ခဲ့ပါသည်။ အရည်အသွေးပိုင်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးပိုင်းတွင် သိသိသာသာတိုးတက်လာပြီးနောက် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းစတင်ပြီး နှစ်နှစ်အကြာတွင် လုပ်ငန်းသည် တည်ငြိမ်သည့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
Korea National Electric ကို တည်ထောင်ခြင်း
ကိုရီးယားအစိုးရ၏မူဝါဒကို ဖော်ဆောင်သည့်အနေဖြင့် အဓိကအားဖြင့် အမေရိကတိုက်သို့ အရောင်စုံတီဗွီများတင်ပို့သည့် အခြေစိုက်ဌာနဖြစ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Korea National Electric ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တည်ထောင်ပြီးတစ်နှစ်အကြာ 1974 တွင် ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဈေးကွက်တွင်းကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများနှင့် 1979 နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကတိုက်သို့ အရောင်စုံတီဗွီများတင်ပို့ရန် တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များကြောင့် Korea National Electric ကိုဖျက်သိမ်းရန် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
Matsushita Radio Singapore အပါအဝင် အထူးပြု ပို့ကုန်လုပ်ငန်း စက်ရုံသုံးရုံကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic သည် အထူး ပို့ကုန်လုပ်ငန်း စက်ရုံ 3ရုံကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်- Matsushita Radio Singapore သည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး Matsushita Precision Motor Singapore မှာ AV နှင့် OA မော်တာများထုတ်ရန်ဖြစ်ကာ Matsushita Electronic Components Singapore သည် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Matsushita Technical Center Singapore ကို တည်ထောင်ခြင်း
စင်္ကာပူအစိုးရ၏ တောင်းဆိုမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Panasonic သည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် Matsushita Technical Center Singapore ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Matsushita Air-Conditioning သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စင်တာကို တည်ထောင်ခြင်း
လေအေးပေးစက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး R&D (သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်1991 ခုနှစ်တွင် Matsushita Air-Conditioning R&D Center Malaysia ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းရာသီဥတုနှင့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံများနှင့်အညီ ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် 1997 ခုနှစ်တွင် Matsushita Compressor & Motor R&D Center ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ အထူးခြားဆုံးသောအောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
မြောက်အမေရိက Panasonic ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ရုံးချုပ်ကို အဆောက်အအုံအသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
မြောက်အမေရိက Panasonic ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရုံးချုပ်အား နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊ နယူဝက်ဂ်မြို့ရှိ အဆောက်အအုံသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်Panasonic မြောက်အမေရိက
မနီလာမြို့ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း
ပို့ကုန်ပစ္စည်းများကို အရောင်းမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သလို တစ်ဆက်တည်းမှာပင် နိုင်ငံခြားအရောင်းအခြေစိုက်ဌာနများ တည်ဆောက်မှုကိုလည်း တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မနီလာမြို့တွင် အဆောက်အဦးအသစ်များ၊ ရုံးခွဲတစ်ခုနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းတစ်ခု ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ 1937 ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားအခြေစိုက်ဌာနခြောက်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ပေးရန် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးသန့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးစနစ်များကို တည်ဆောက်ခြင်း
Panasonic သည် ပြည်တွင်း (ဂျပန်ဈေးကွက်) တွင် စတင်လည်ပတ်ရင်းဖြင့် ဆည်းပူးရရှိခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ အရောင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်၊ ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးစနစ်နှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်အတွင်းတွင်လည်း ၎င်းနည်းလမ်းများကိုပင် ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ အနှစ်ချုပ်ဆိုရလျှင် နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးသန့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Beijing Matsushita Color CRT ကို တည်ထောင်ခြင်း
Beijing Matsushita Color CRT ကို Panasonic နှင့် ဘေးကျင်းမြို့တော်၏ ပထမဆုံး ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းသည် Panasonic ၏ အခြေခံမူဝါဒဖြစ်သော "နိုင်ငံ၏ အလှိုက်လှဲဆုံးကြိုဆိုခြင်းခံရသောလုပ်ငန်းအား ရွေးချယ်ရေး" အပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုမူဝါဒနှင့်အညီ ယခင်ကာလများကတည်းက တင်သွင်းရန်လိုအပ်ခဲ့သော ရောင်စုံတီဗွီ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ကတ်သုတ်ရောင်ခြည်မီးလုံးများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုများကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပနားမားမြို့တွင် Matsushita Electric Trading လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်း တည်ထောင်ခြင်း
Matsushita Electric Trading လုပ်ငန်းသည် ပနားမားမြို့တွင် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဈေးကွက်သုတေသနကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် အဆိုပါရုံးသည် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုများဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ လေ့လာခဲ့ပြီး သင့်လျော်သောမိတ်ဖက်များ ရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ဘက်ထရီခြောက်ဈေးကွက်သည် အနာဂတ်အတွက် အလားအလာရှိနိုင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများကို 100% ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးငွေဖြင့် မတည်ခွင့်ပြုထားသော ပီရူး၊ ကိုစတာရီကာနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် တီဗွီ အလုံးရေပေါင်3းသန်းအထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်း
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် 1988 ခုနှစ်မှစတင်ပြီး တီဗွီများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာခဲ့ရာ အလုံးပေါင်3းသန်းအထိ မှတ်တမ်းတင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
Panasonic Chile ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic ထုတ်ကုန်များကို 1966 ခုနှစ်ကတည်းက ဖြန့်ချိသူများမှတစ်ဆင့် ရောင်းချလာခဲ့ရာ အဆိုပါနှစ်တွင် ဖြန့်ချိသူများနှင့်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီး Panasonic Chile ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် အခြေစိုက်ဌာနဖြစ်သော Extrema စက်ရုံကို တည်ထောင်ခြင်း
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပမာဏများများထုတ်လုပ်နိုင်သော စက်ရုံအသစ်ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ အိတ်စ်ထရီမာမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦးများ၊ တည်ဆောက်ရေးနည်းလမ်းများနှင့် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်များအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်ရေးအခြေစိုက်ဌာနဖြစ်သော အဆိုပါစက်ရုံတွင် ရေခဲသေတ္တာများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း 2014 တွင် အဝတ်လျှော်စက်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
Brand Functions မှလွဲ၍ Panasonic Latin America အခြေစိုက်ဌာနကို ဆာပေါ်လိုမြို့မှ ပနားမားမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
လက်တင်အမေရိက၏ ပထမဆုံး ပူးပေါင်းမှုနှင့်ဝယ်ယူမှုဆောင်ရွက်ချက်အနေဖြင့် Digital Full Services အား ဝယ်ယူခြင်း
Panasonic ဘရာဇီးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်းရှိ နိုင်ငံတွင်းအစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၌ ဈေးကွက်ဝေစု ကြီးကြီးမားမားရရှိထားသည့် Digital Full Service ကို ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ကိရိယာပစ္စည်းများ ပေါင်းစည်းပေးခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များဖြန့်ဝေပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော အဆိုပါကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် Panasonic အနေနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်များအပေါ်အခြေခံပြီး ဖြေရှင်းချက်များနှင့် တန်ဖိုးဖြည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို တိုးချဲ့ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
Panasonic ဘရာဇီးသည် လေအေးပေးပစ္စည်းများကို ပမာဏများစွာထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ UNION RHAC TECNOLOGIA ကို ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း
Panasonic ဘရာဇီးသည် အေးခဲစက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လေအေးပေးပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း UNION RHAC TECNOLOGIA ကို ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဘရာဇီနိုင်ငံတွင် 25 နှစ်တာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့သော မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ပမာဏများစွာထုတ်လုပ်သော စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများ၊ စက်ရုံများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ကြီးမားသောစီမံကိန်း 100 ကျော်လောက် တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးသော ယခင်စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် Panasonic သည် ကျယ်ဝန်းသည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုသော လေအေးပေးစက်များကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် B2B ဆောင်ရွက်ချက်များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။[Press Release] Panasonic သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ လေအေးပေးစက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီဖြစ်သော UNION RHAC TECNOLOGIA ကို ရယူခြင်း (2017 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 13 ရက်)
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ဘက်ထရီခြောက်စုစုပေါင်း 10 ဘီလျံထိ မှတ်တမ်းတင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း
Panasonic ဘရာဇီးကို 1970 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘက်ထရီခြောက်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းတည်ထောင်ပြီး နှစ် 50 ပြည့်မြောက်သောနေ့တွင် ဘက်ထရီအလုံးပေါင်း 10 ဘီလျံထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သလို အဆိုပါအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ဆာဂျို့စ်စက်ရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
National Storage Battery ကို စတင်တည်ထောင်ခြင်း
ကားဘက်ထရီလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်အလားအလာကို ကြိုတင်မှန်းဆပြီး ထုတ်ကုန်အသစ်ကို ကြိုတင်သုတေသနပြုနေပြီးဖြစ်သော တည်ထောင်သူ ကိုနိုဆူကီ မတ်ဆုရှိတသည် 1934 ခုနှစ်တွင် လျှပ်သိုဘက်ထရီလုပ်ငန်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပူးပေါင်းမိတ်ဖက်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ 1935 ခုနှစ်တွင် National Storage Battery ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် Panasonic လျှပ်သိုဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်မှု၏ ကနဦးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။
လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်များအပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းစုစနစ်သစ်ကို စတင်ခြင်း
လုပ်ငန်းစုအတွင်းတွင် တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်အား အထပ်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများရှိနေသောကြောင့် လက်ရှိယှဉ်ပြိုင်မှုများအား ပြေလည်စေရန်အလို့ငှာ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုလုံး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ 2002 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Matsushita Communications Industrial ၊ Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko ၊ Matsushita-Kotobuki Electronics Industries နှင့် Matsushita Graphic Communication Systems ဟူသော ကုမ္ပဏီငါးခုစလုံးအား လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 2003 ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်သည့်နယ်ပယ်ရှိ Matsushita Electronic Components နှင့် Matsushita Battery Industrial တို့အား လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများအဖြစ် လုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်သုံး၊ ရုံးပစ္စည်းပစ္စည်းလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများကို ဖျက်သိမ်းပြီး Matsushita Home Appliance ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။လုပ်ငန်း သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
ကုမ္ပဏီ4ခုစနစ်ကို စတင်ခဲ့ခြင်း
ကုမ္ပဏီဌာနပေါင်း 49 ခုကို Appliance ကုမ္ပဏီ၊ Eco Solutions ကုမ္ပဏီ၊ AVC Network ကုမ္ပဏီနှင့် Automotive and Industrial Systems ကုမ္ပဏီဟူသော ကုမ္ပဏီလေးခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်မှုအသစ်များနှင့် အဆိုပါနယ်ပယ်များအတွက် အဓိကစံနှုန်းများကို တွန်အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အဆိုပါဌာနများကိုပံ့ပိုးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။လုပ်ငန်း သမိုင်းမှတ်တမ်း | Panasonic
Kyushu Matsushita Electric ကို တည်ထောင်ခြင်း
ထိုကာလတွင် Panasonic သည် ရှိရင်းစွဲရင်းမြစ်များအား အထူးကဏ္ဍရပ်များအဖြစ်စိတ်ပိုင်းကာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသစ်များစွာသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ် ကုမ္ပဏီများ၏ တောင်းဆိုမှုအရ Panasonic သည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများအား လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီအဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို ပြန်လည်စီစဉ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သစ်များသို့ အဆိုပါလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလအတွင်းတွင် Panasonic လုပ်ငန်းစုသည် အတော်လေး ကြီးထွားနေပြီဖြစ်ပါသည်။ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲအနေဖြင့် ဖူကူအိုကာမြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Kyushu Matsushita Electric အား အသုံးမပြုဘဲရှိနေသော စက်ရုံတစ်ရုံကိုဝယ်ယူပြီး အချောသတ်ထုတ်ကုန်တွေများထုတ်လုပ်သော အထူးစက်ရုံအဖြစ်ပြုလုပ်ရန် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများက အခိုင်အမာတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် မော်တာနှင့် ထရန်စဖော်မာများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လျှပ်စစ် ခဲတံချွန်စက်နဲ့ အစာအခြောက်ခံစက်များကို တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အိမ်သုံးရေစုပ်စက်များကိုလည်း ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကာ ရေဒီယိုနှင့် တီဗွီထုတ်လုပ်မှုများအား တဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ခဲ့ပါသည်။
* 2003 ခုနှစ်တွင် Matsushita Graphic Communication Systems နှင့် လုပ်ငန်းစုတွင်းအခြားဌာနများ တစ်ခုတစ်စည်းတည်းပေါင်းစည်း၍ Panasonic Communications အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 2010 ခုနှစ်တွင်လည်း လုပ်ငန်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး System Solutions နှင့်တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းစည်းကာ Panasonic System Networks ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Panasonic မက္ကဆီကိုက လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများသို့ LCD တီဗွီများ စတင်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ခြင်း
ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ Extrema စက်ရုံတွင် 1,000,000 လုံးမြောက် ကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း
ရေခဲသေတ္တာနှင့် အဝတ်လျှော်စက်များကိုထုတ်လုပ်သော Extrema စက်ရုံသည် တည်ထောင်ပြီး5နှစ်ပြည့်သည့်နေ့တွင် အလုံး 1,000,000 မြောက် ကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Panasonic ထုတ်ကုန်များကို နယူးဇီလန်ဈေးကွက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း
1971 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီနှင့် Fisher & Paykel လုပ်ငန်းကြား အရောင်းသဘောတူညီမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း National နှင့် Panasonic လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များကို နယူးဇီလန်ဈေးကွက်အတွင်းသို့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Panasonic ၏ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲကို ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်သည်ဟု အပြုသဘောဆောင်သော ထင်မြင်ချက်များ ရရှိထားသည့် အလွန်အလားအလာကောင်းသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံထားရပါသည်။
Panasonic New Zealand ကို တည်ထောင်ခြင်း
Panasonic New Zealand ကို 1998 ခုနှစ်တွင် တရားဝင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်ထိ ခရစ်ချာ့ခ်ျ၊ ဝယ်လင်တန်နှင့် အောကလန်းမြို့ရှိ ရုံးချုပ်များတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း 115 ဦးထိရှိနေပြီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။